Dhijitari Kushambadzira - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
evanhu vezvenhau inotora echinyakare nzira dzekutengesa dzatave tashandiswa kwese kwenguva yakareba uye dzinovazunza. Digital Marketing inzira yakanaka yekusimudzira mhando yako mune ino nyowani nzvimbo yepamhepo iri kutora pasi rese. Digital Marketing inokupa iwe nemikana yekushambadza iwe pachako, zvigadzirwa zvako uye masevhisi, uye usvike kune vako vateereri vateereri. Iwe unofanirwa kuve nekuvapo pa evanhu vezvenhau kuitira kuti uvake mhando yako uye ubatanidzane nevatengi vako. evanhu vezvenhau inzira yakanaka yekudyidzana nevateveri vako uye vatengi, uye kuvaka kuvimba. Nekushingairira pa evanhu vezvenhau, iwe unogona kudyidzana navo uye unoita navo mukukurukurirana nezve zvigadzirwa zvako uye masevhisi. Digital Marketing ndiyo amburera izwi rekushambadzira kwese rinoshandisa maturusi edhijitari kusvika kune vateereri.
Dhijitari kushambadzira ndiyo Ramangwana reKushambadzira.
Digital Marketing inzira yakanaka yekusimudzira mhando yako mune ino nyowani nzvimbo yepamhepo iri kutora pasi rese. Digital Marketing inokupa iwe mikana yekuzvishambadza iwe, zvigadzirwa zvako nemasevhisi, uye kusvika kune chako chinangwa chevateereri. Zvakakosha kufunga digital advertising sechikamu chakakosha cheyakatenderedzwa zvakanaka evanhu vezvenhau sarudzo. Digital Marketing ndicho chinhu chikuru uye kana ukashanda mukushambadzira uye uchida kuve nemukana wekubudirira, iwe unofanirwa kuve nekuvapo pa Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube, nezvimwe. evanhu vezvenhau Mapuratifomu. Usafunga kuti unokwanisa evanhu vezvenhau kumashure, iwe unofanirwa kunyatsoshanda pairi. Digital Marketing yakakosha pabasa rako kana uri mundima yetekinoroji. Digital Marketing ndiyo yakawanda yehurukuro yemhando dzose dzekutengesa dzinoshandisa maturusi edhijitari kusvika kune vateereri. Mhando iyi yekushambadzira inosanganisira evanhu vezvenhau, content marketing maitiro, kugadzira zvigadzirwa zvako uye masevhisi kuti utore zita rako kunze uko. evanhu vezvenhau inzira yakanaka yekusimudzira mhando yako mune ino nyowani nzvimbo yepamhepo iri kutora pasi rese. Digital Marketing inokupa iwe mikana yekuzvishambadza iwe, zvigadzirwa zvako nemasevhisi, uye kusvika kune chako chinangwa chevateereri. Zvakakosha kufunga digital advertising sechikamu chakakosha cheyakatenderedzwa zvakanaka evanhu vezvenhau sarudzo. Digital Marketing ndicho chinhu chikuru. Kana iwe ukashanda mukushambadzira uye uchida kuve nemukana wekubudirira, iwe unofanirwa kuve nekuvapo pa Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube, nezvimwe. evanhu vezvenhau Mapuratifomu. Iwe unofanirwa kukwanisa kukura yako yekutevera uye kuvaka kuvimba. Digital Marketing itsika yekushandisa maturusi edhijitari kusvika kune vateereri. Digital Marketing inosanganisira email kushambadzira, kutsvaga injini kushambadzira, evanhu vezvenhau marketing, evanhu vezvenhau optimization, content marketing, Uye zvakawanda. Digital Marketing isarudzo yakanaka kune vanoda mabhizinesi nekuti haidhure uye iri nyore kumisikidza nekugadzirisa.
Kukanganisa kweSocial Media pamusoro peBhizinesi
evanhu vezvenhau inzira itsva yekutengesa yako bhizimisi. Zvinotora nzira dzechinyakare dzekushambadzira uye dzinovatenderedza pamisoro yavo. Iyo zvakare inzira yakanaka yekubatana nevatengi vako uye kuvaka kuvimba navo. Ini ndinofunga shanduko huru yatakaona mumakore mashanu apfuura ndeyekusimuka kubva kune yakabhadharwa-kune midhiya kuenda kune yakawana midhiya uye digital advertising. Izvi zvinodaro nekuti zvave nyore kuyera mibairo yenhau inowanwa pane zviri zvechinyakare midhiya uye pamwe nekuti. evanhu vezvenhau yachinja nzira yatinotaurirana nayo. Digital Marketing ndizvo chaizvo zvese zvine chekuita neiyo Indaneti uye zvakasiyana Mapuratifomu tine mukana wekuti titaurirane nevateereri vedu. Digital Marketing ndeye zvese kubva pakutsvaga injini optimization kusvika kubhadhara-per-click mishandirapamwe kugadzira zvigadzirwa zvako uye kuzvitengesa Mapuratifomu seAmazon, kushandisa masosi se Twitter ne Facebook kuti ubatane nevateereri vako. evanhu vezvenhau yakanaka nekuti inokutendera kuti ubatane nevateereri vako vaunoda nenzira itsva. Inokubatsira iwe kuvaka brand yako, kuvaka mukurumbira wako, uye kuvaka hukama nevateereri vako. evanhu vezvenhau haisi nzira yekukurukura nevanhu chete, asi zvakare inzira yekudzidza nezvevateereri vako uye zvavanoda kubva kwauri. Sezvo Indaneti inoramba ichikura uye ichiwedzera kuve chikamu chakakosha chehupenyu hwevanhu, iri kuramba ichiwedzera nzvimbo iyo vanhu vanogona kutarisira kuona kushambadza kwezvigadzirwa nemasevhisi. Digital Marketing ndiyo nzira yeramangwana sezvo vanhu vachiwedzera kuvimba ne Indaneti. Digital Marketing ndiko kushambadzira kupi nekupi kunoshandisa maturusi edhijitari kusvika kune vateereri. Digital Marketing yakakamurwa kuita mapoka maviri: kushambadzira ne Websites uye kushambadzira ne evanhu vezvenhau. Ose maviri emhando idzi dzekushambadzira anobatsira pabasa rako.